Belize ndege kubva kuSeattle neLos Angeles paAlaska Airlines ikozvino
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Belize ndege kubva kuSeattle neLos Angeles paAlaska Airlines ikozvino
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Belize ndege kubva kuSeattle neLos Angeles paAlaska Airlines ikozvino.
Belize inopa inotyisa mhuri-inoshamwaridzika, eco-inoziva mikana - kubva pazvitsuwa zvine hunyanzvi kuenda kumasango akasvibira nenzvimbo dzekare. Uye iri pedyo kupfuura zvaungafunga: Kubva LA, ingori maawa mashanu chete nendege, uye kubva Seattle imaawa matanhatu.
Kana iwe uchitsvaga nzvimbo itsva yepasirese yekutizira - ine musanganiswa usingarondedzereki wemahombekombe, adventures nenhaka isiri kure zvakanyanya kubva kuWest Coast - inguva yekufunga nezvekusaswa kwezuva Belize. Kuita kuti kuronga rwendo ikoko kuve nyore, Alaska Airlines yakatanga sevhisi isingamire nhasi kuBelize City kubva kuSeattle (SEA) neLos Angeles (LAX).
Kubva kuguta guru reBelize, denga ndiro muganhu wekuongorora nekunakidzwa. Tichifunga nezve kudiwa kwakasimba kwendege kuenda kuBelize uye kuvaka pachiziviso chedu chekutanga chebasa remwaka munguva yechando, Alaska Airlines iye zvino arikuda kubhururuka nendege nzira yeLos Angeles-Belize City gore rose.
“Kwemakore anoda kusvika makumi maviri musika weBelizean wanga uri pa radar yedu. Isu tinofara kuve nekumisikidza sevhisi kubva kuSeattle neLos Angeles, "akadaro Brett Catlin, mutevedzeri wemutungamiri wetiweki nemibatanidzwa. Alaska Airlines. "Belize inopa inotyisa mhuri-inoshamwaridzika, eco-conscious mikana - kubva pazvitsuwa zvemifananidzo kusvika kumasango akasvibira nenzvimbo dzekare. Uye iri padyo kupfuura zvaungafunga: Kubva ku LA, ingori nendege yemaawa mashanu, uye kubva kuSeattle imaawa matanhatu.
"Pamusoro pekukwezva bhizinesi rakakura rekudyara uye huwandu hwevanhu, ndege nyowani iyi ichakurudzira kushanya uko kwakakosha Belize's kubudirira. Zvinouya panguva yakafanira sezvo zvichiwedzera kusimudzira mashandiro eindasitiri,” vakadaro Hon. Anthony Mahler, Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika neDiaspora Relations. "Saka tinokoshesa kudyidzana kwedu neAlaska Airlines mukupa kubatana kwakakosha kune vafambi vanobva kuWest Coast vanofarira kuzvisimbisa uye kuzorora mumatombo edu ekupisa uku vachinyura mune yakapfuma, yakasarudzika tsika."
Alaska sevhisi ku Belize inoshanda kana kana pasvondo pakati peLos Angeles neBelize City (BZE) uye kaviri pasvondo pakati peSeattle neBelize City - panguva chaiyo yemwaka wezororo.
Inotanga Ends Guta Pair Kuenda Kusvika maitikiro ndege
Nov. 19 Gore rose LAX – BZE 11: 00 am 5: 30 pm M, W, F, Sa 737-800
Nov. 20 Gore rose BZE – LAX 10: 00 am 1: 30 pm T, Th, Sa, Su 737-800
Nov. 19 Dai 21 SEA – BZE 8: 30 am 4: 35 pm F, Sa 737-800
Nov. 20 Dai 22 BZE – SEA 11: 00 am 3: 55 pm Sa, Su 737-800